#Maraykanka Oo Muwaadiniintiisa Uga Digay In Ay U Safraan Guud ahaan Gobaladda uu ka Koban yahay Dalka Soomaliya. - Get Latest News From Horn of Africa
#Maraykanka Oo Muwaadiniintiisa Uga Digay In Ay U Safraan Guud ahaan Gobaladda uu ka Koban yahay Dalka Soomaliya.
By axadle	 On Dec 27, 2018 Last updated Dec 28, 2018
Dowladda Mareykanka ayaa soo saartay digniin dhanka socdaalka ah oo loo jeedinaayo muwaadiniinta u dhashay dalkaasi inaysan u safrin Somoaaliya guud ahaan.
Warbixin ka so baxday wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka, ayaa lagu sheegay in Mareykanka uu kaga digaayo muwaadiniinta u dhashay dalkiisa inaysan aadin Soomaaliya.
“Somaliya wali waxaa ka jira Afduubka iyo dambiyada kale ayaa ka dhaca Soomaaliya oo ay ku jiraan Puntland iyo Somaliland, waxaana ku badan jidgooyada sharci darrada ah” ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay Wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka..
Meelo badan oo iskuulo ah ayaa ka furaan oo logu magac darey “dhaqan celinta dhalinta” waxaay ku yaalan guud ahaan Soomaaliya iyada oo aan haysan ruqsadaha iyo kormeerka calami ah oo la aqonsan yahay. Warbixinnada waxaay intaa ku darayaan in lagu hayo xad-gudub jireed iyo in dadka lagu hayo rabitaankooda la’aantii xarumahan waa mid iska caadi noqotey.
Argagixisadu waxaay sii wadaan qorsheynta afduubka, qaraxyada, iyo weerarrada kale ee Soomaaliya.
Waxaa laga yaabaa in ay weeraraan ku dhufo ka carar ah ay fuliyaan ama mid digniin la’aan ay fuliyaan, Iyaaga oo beegsanaya garoomada iyo dekadaha, dhismayaasha dawladda, hoteeladda, makhaayadaha, meelaha dukaameysiga, iyo meelaha kale ee ay mushtamaca ay isugu yimaadaan iyo qurba joogta ku soo noqdey dibada, iyo sidoo kale xafiisyadda hay’adaha, milatariga, iyo Wafduuda reer galbeedka.
Burcad-badeeddu waxay ka hawlgalaan biyaha Geeska Afrika, gaar ahaan biyaha caalamiga ah ee u dhow Soomaaliya.
Dawladda Maraykanku waxaay leedahay awood xadidan inay u fidiso adeegyo gurmad deg deg ah muwaadiniinta Mareykanka ah ee Soomaaliya ku sugaan sababtoo ah waxaan jiriin safaradda sii dhab ah uga hawlagasha Soomaaliya.
Waxaa lagu sheegay warbixinta in Soomaaliya wali ay ka jirto qataro dhanka ammaanka ah ,sida dilalka qorsheysan, afduubka, hanjabaadaha iyo falalka kale ee amnidarada ee Soomaaliya ka dhaca.